Mana isan’andro – Alarobia 13 janoary 2016 – Athis Fanantenana
Mana isan’andro – Alarobia 13 janoary 2016
EKSODOSY 3.1-22 F. 1, 6
Miantso mpanompo hamonjy ny olony Andriamanitra
Homanin’Andriamanitra ny mpanompony (1-4).
Na ny nanabeazana an’i Mosesy tao amin’ny mpanjaka Egyptiana tamin’ny alalan’ny zanakavavin’i Farao, na ny fiandrasany ny ondry aman’osin’i Jetro rafozany tany Midiana ka hatrany an-efitra tany an-tendrombohitra Horeba, dia samy endriky ny fanomanan’Andriamanitra azy avokoa. Ny zava-mahagaga hitany (2) no nitarika azy handinika sy hamantatra (3) ka nandrenesany sy namaliany ny antson’Andriamanitra (4).
Fandinihan-tena : Fantatrao ve ny antom-pisianao eto na ny antson’Andriamanitra ho anao ? Diniho amin’ny fiainanao rehetra sy ny zava-misy manoloana anao izany !
Irahin’Andriamanitra ny mpanompony (5-10).
Tsy miantso fotsiny Andriamanitra fa sady mitaky fahamasinana amin’izay antsoiny Izy (5) no nanambara ny maha-Izy Azy (6) ary milaza mazava ny anton’ny iraka (7-10). Tandindon’ny hiantson’Andriamanitra ny mpanompony rehetra hanafaka ny olona amin’ny fangejan’i Satana ny fiantsoana an’i Mosesy hanafaka ny zanak’Israely amin’ny fampahorian’ny Egyptiana.
Fanontaniana : Efa fantatrao ve ilay iraka lehibe ?
(Diniho Matio 28. 18-20).
Ampaherezin’Andriamanitra ny mpanompony (11-22). “Dia izaho ve”? Izany mazàna no avalin’ny mpanompon’Andriamanitra mahazo antso na voairaka hanao asa (11, 13) ; mety manao toy izany koa ianao. Tsarovy anefa fa Izy Andriamanitra, rehefa maniraka, dia manohana (12), manome antoka (14); hatramin’ny teny rehetra holazaina (15-18) sy ny zava-manahirana mety hitranga aza (19-22) dia hampahafantariny.
Ho anao izay manaiky irahina ny tenin’i Jesoa hoe : “ … ary indro Izaho momba anareo mandrakariva …” (Matio 28. 20b).